Impressum - New Presse.de Izindaba Ukukhishwa
Nach geltendem Recht sind wir verpflichtet, Verbraucher auf die Existenz der Europäischen Online-Streitbeilegungs-Plattform hinzuweisen, angasetshenziswa ukuze ukuxazulula ingxabano, ngaphandle inkantolo kufanele akhanyiswe. I-European Commission unesibopho zokumisa yesikhulumi. I-European inthanethi platform kusombulula tinchabano ingatholakala lapha: http://ec.europa.eu/odr. imeyili yethu: info@neu-presse
kodwa siyasho, ukuthi azilungile, ukubamba iqhaza European platform online kusombulula tinchabano e impikiswano isiphetho inqubo. Sebenzisa ukuxhumana ukujabulisa imeyili kanye nenombolo yocingo yethu ngenhla.
Disclaimer - Izaziso Zezomthetho
§ 1 Isexwayiso kokuqukethwe
I mahhala futhi evulekile ukufinyelela okuqukethwe kule webhusayithi badalwa ngokucophelela okukhulu. Umhlinzeki bale webhusayithi eqala akukho umthwalo ukunemba kanye Ukwenza umeluleki lesibonwa khulula kanye nokufinyelela ovulekile futhi Izindaba. Iminikelo ngu umbono wombhali kanye akusho ukuthi umbono lomhlinzeki. kungekho sokusebenzelana phakathi umsebenzisi futhi umhlinzeki umane ngokumemeza okuqukethwe mahhala futhi evulekile-ukufinyelela imizimba, kuze kube manje siziswele inhloso zomthetho yeleyo isikhangiso.
§ 2 izixhumanisi zangaphandle
Leli sayithi lewebhu iqukethe links kwamanye amawebhusayithi (“izixhumanisi zangaphandle”). Lawo mawebhusayithi umthwalo we-opharetha. Umhlinzeki ihlolwe okuqukethwe angaphandle at uxhumano lokuqala izixhumanisi zangaphandle, ukuthi noma yikuphi ukuphulwa zomthetho. Ngaleso sikhathi akukho ukwephula atholakele. Umhlinzeki ayinalo ithonya endleleni umklamo amanje nawesikhathi esizayo kanye nokuqukethwe emakhasini kuxhumene. Ukufakwa kwezixhumanisi zangaphandle akusho, ukuthi umhlinzeki usebenzisa okuqukethwe ngemuva inkomba noma isixhumanisi. A control unomphela link yangaphandle umhlinzeki ngaphandle kobufakazi obuphathekayo ukwephula ezinengqondo. Ngokufunda ukwephulwa kwamalungelo, ezifana izixhumanisi zangaphandle izosuswa ngokushesha.
§ 3 kumbhali- Nokusebenza Rights
Ulwazi eshicilelwe kule webhusayithi angaphansi copyright isiJalimane- futhi empahla kwesokudla. Uhlobo ngalunye kwezingu-copyright isiJalimane- futhi empahla ilungelo lokusetshenziswa olungagunyaziwe kudinga imvume yangaphambili ebhalwe phansi umhlinzeki noma zabanikazi abafanele. Lokhu kusebenza ikakhulukazi ukuba Lokuzaliswa, ukucutshungulwa, translation, isitoreji, ukucubungula noma. Lokuzaliswa wokuqukethwe yolwazi noma enye into yobuchwepheshe futhi izinhlelo. Okuqukethwe kanye namalungelo abantu besithathu bachazwa ngokuthi ezifana. I ukukhiqizwa noma ukusabalalisa okuqukethwe noma ephelele Amakhasi akuvunyelwe futhi yisigwebo. Kuphela ukukhiqizwa amakhophi nokulanda sokuzifunela, ukusebenzisa kwangasese nokungathengiswa.
Ukuziletha kule website ozimele zangaphandle kuvunyelwe kuphela imvume ebhaliwe.
§ 4 Imigomo Special
Njengoba izimo kufike ezahlukene esikhethekile umuntu esebenzisa le sayithi kusuka izigaba okungenhla kumane, is lolubekwe endaweni efanele. Kulokhu imigomo eqondile ukusetshenziswa isicelo esimweni ngasinye.
labo: Impressum-Generator – manje KumTjhutjhisi Tubingen usesho.
ILA-Eröffnung mit Bundeskanzlerin Merkel, 25. April 2018, 13 Uhr bis 14.30 ukubukela, Berlin ExpoCenter Airport 23. April 2018
Archivmeldungen Khetha Inyanga April 2018 Mashi 2018 Februwari 2018 January 2018 December 2017 November 2017 Okthoba 2017 Septhemba 2017 Agasti 2017 Julayi 2017 Juni 2017 May 2017